လာအိုနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် Delta Plus ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
လာအိုနိုင်ငံမြို့တော် ဗီယင်ကျန်း၌ လမ်းလျှောက်နေသူများအား ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဗီယင်ကျန်းတစ်ခွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်မှာ Delta Plus ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း လာအိုနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
လာအိုနိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ပြည်တွင်းကူးစက်မှု အသစ် ၁၆၂ ဦးနှင့် ပြည်ပဝင်ရောက်လာသော ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၅၂ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်အထိ အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၉,၃၉၉ ဦးထိ ရှိလာကြောင်း လာအိုနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကူးစက်ရောဂါများထိန်းချုပ်ရေးဌာန မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rattanaxay Phetsouvanh က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗီယင်ကျန်းမြို့တော် အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကူးစက်ခံရသူများအားစစ်ဆေးရာတွင် Delta Plus ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုသည်။
Delta Plus ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် Delta ဗိုင်းရပ်စ် ၏ အသွင်ပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် မျိုးဗီဇဖြစ်ပြီး ကူးစက်မှုမြင့်မားကြောင်း သိရသည်။
မြို့တော်တွင်းရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွင် COVID-19 ကူးစက်မှုများ တဟုန်ထိုးမြင့်တက်မှုအားတွေ့ရှိပြီးနောက် ဗီယင်ကျန်းမြို့အား စက်တင်ဘာ ၁၉ရက် မွန်းလွဲပိုင်းမှစ၍ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ ခရီးအသွားအလာတင်းကြပ်ကန့်သတ်မှု lockdown ချမှတ်ထားကြောင်းသိရသည်။
လာအိုနိုင်ငံ၌ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်အထိ အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၉,၃၉၉ ဦး နှင့်စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၁၆ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ COVID-19 လူနာပေါင်း ၁၅,၁၂၈ ဦးမှာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာ၍ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာအိုနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ် ၂၄ ရက်တွင် ပထမဆုံး COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၂ ဦး တွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Xinhua)
VIENTIANE, Sept. 20 (Xinhua) — The Lao Ministry of Health said the COVID-19 variant that was spreading through the capital Vientiane is the Delta Plus variant.
The country reported its first two confirmed COVID-19 cases on March 24 last year. Enditem
Photo- People walk onastreet in Lao capital Vientiane July 21, 2021.(Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)